Xarunta Hakkari Ski Center ayaa isku diyaarinaysa Xilliga Cusub | RayHaber
HomeTURKEYGobolka Waqooyi Bari30 HakkariXarunta Hakkari Ski Center ayaa isku diyaarineysa Xilliga Cusub
21 / 11 / 2019 30 Hakkari, Gobolka Waqooyi Bari, GUUD, TURKEY, TELPHER
hakkari ski dalxiis ayaa isu diyaarinaya hamiga xilli ciyaareedka cusub
Xarunta Hakkari Ski Center ayaa isku diyaarineysa Xilliga Cusub; Guddoomiyaha iyo Kuxigeenka Duqa magaalada Hakkari Idris Akniyik, 2.500 altitude ee Merga Butan Ski Center ayaa dhameystirtay dhismaha wiishashka barafka iyo aaladda piste.
Guddoomiyaha Akbıyık ayaa booqday wiishashka barafka lagu ciyaaro ee kuyaala bartamaha barafka wuxuuna xog ka helay madaxa dhalinyarada iyo isboortiga Reşit Güldal.
Guddomiye Idiris Akbiyik, oo markii dambe warbixin ka siiyay xubnaha saxaafadda, ayaa sheegay in xarunta barafka ay diyaar u tahay xilliga jiilaalka iyadoo la soo gabagabeynayo shaqada kursi-ka iyo gogosha piste.
Isagoo ku nuuxnuuxsanaya in aagga orodka lagu kordhiyey mitirrada '3.500 mitir', ayuu Guddoomiyaha Akbıyık yidhi, ık Waxaan samaynnay jidadkeenna. Waxaan mar labaad ku qabanay gudoomiye kuxigeen. Wadadkeenna hore, oo ah mitirka 1.200, ayaa sidoo kale la dayactiray. Waxaan samaynay balli yar anagoo qabanqaabinayna muuqaalka muuqaalka muwaaddinteenna si aan u leenahay finiinno ama nashaadaadyo kala duwan xagaaga. Dhibaatada ugu weyn ee Hakkâri waa dhibaatada hoyga, dhibaatada hudheelka. Si loo xalliyo dhibaatada hoyga loogu talo galay dadka jecel isboortiga iyo kuwa jecel barafka, waxaan u sameynay hindise hudheel iyo xarun tababar isboorti. Iyada oo taageero laga helayo Wasaaradda Dhallinta iyo Isboortiga, Maamulka Gobollada Gaarka ah iyo DAKA, oo ah Guddoomiyaha Gobolka Hakkâri, waxaan rajeynayaa inaan ku dhammeyn doonno dhismaha hoteelka sannadka soo socda ee 2-3 oo aan ku abaabuli doonno tartamada heer qaran ama xitaa mustaqbalka. Hakkâri runti waxay leedahay dhalinyaro badan oo karti leh isboorti iyo gaar ahaan ciyaaraha qaboobaha iyo buuraha. Hadda xitaa, inkastoo tixraacayo goobaha hadda aynu la ciyaartoyda Turkey la degree marka hore la xiriira skiing in laamaha badan leeyihiin. Waxaan rajeyneynaa, tasiilaadkan, mustaqbalka isboortiga in Hakkari wuxuu noqon doonaa mid qurux badan. ”
Diyaarinta Xilliga Jiilaalka ee Sarıkamı Ski
Çambaşı Ski Center Diyaarinta Xilliga
Guddoomiyaha Akbiyik wuxuu ku sugan yahay Hakkari Ski Resort…
Warka wanaagsan ee Duqa Magaalada Erkoç! .. Yedikuyular Ski Center ...
Dhismaha Merga Butane
Maanta Taariikhda: 22 November 1922 ee Ismet Pasha ee Lausanne